■ထိုင်းတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာငွေစက္ကူအတု ၅ မီလီလျံထုတ်လုပ်သည့်စက် ၃ လုံးကို ဆိုက်ဘာရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရမိ
ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်ပထုန် ခရိုင် ဘန်းလိန်းမြို့တွင်နိုဝင် ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ၁၄:၀၀ ချိန်က US $ ဒေါ်လာငွေစက္ကူ ၅ သန်းကို ထုတ်လုပ်သည့်စက် ၃ လုံးနှင့်အတူတရားခံ ၄ ဦးကိုသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်မှုခင်းနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့ ၊ ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၊ ဒုတိယရဲချုပ် ဒမ်းလုံး ကစ်တိပရဖတ် ဦးစီးတဲ့အထူးအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Thairath News သတင်းစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြခဲ့ ။
Police Cyber Taskforce ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ Accounts facteing အမည်ဖြင့် Miss . Jiraphat ဆိုသည်သူ ဒေါ်လာငွေစက္ကူများကို Online မှတဆင့်ရောင်းချနေသည်ကို သဲလွန်စရရှိရာမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရာ ငွေစက္ကူအတုထုတ်လုပ်သည့်စက်ဖြင့် အော်ဒါလက်ခံရောင်းချသည်ဟုသိရှိရသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ငွေစက္ကူဝယ်ယူသူအဖြင့် အသွင်သဏ္ဍန်ယူကာခြေရာခံမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆက်စပ်တရားခံ ၄ ဦးကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
ဖမ်းဆီးရမိချိန်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ပြီးသားဒေါ်လာငွေစက္ကူ ၁၀၀ တန် အရွက်ရေ ၃၆၀၀၀ တို့ကိုသိမ်း ဆည်းရမိခဲ့ပြီး ငွေစက္ကူ ၅၀၀၀၀ ကျော် ( ထိုင်းဘတ် သန်း ၁၅၀ နှင့်ညီမျှသည် ) ကိုပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ဆက် လက်၍ ကွင်းဆ က်တရားခံများအားဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် အပူတပြင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါသည် ။
PCT ရဲတပ်ဖွဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဤအမှုနှင့်ပါတ်သက်ပြီး မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိတို့ပတ် ဝန်းကျင်တွင် Money Laundering လုပ်ငန်းများနှင့်ဆင်စပ်သူများ သံသယရှိသူများ ၊ ဒေါ်လာငွေစက္ကူအတုများ လဲလှယ်ရောင်းချနေသူများတွေ့ရှိပါက PCT ဆိုက်ဘာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Hotline နံပါတ် 1599 သို့ ၂၄ နာရီဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ဟုသိရှိရသည် ။
■ထိုင္းတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြစကၠဴအတု ၅ မီလီလ်ံထုတ္လုပ္သည့္စက္ ၃ လုံးကို ဆိုက္ဘာရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးရမိ
ထိုင္းနိုင္ငံ နခြန္ပထုန္ ခရိုင္ ဘန္းလိန္းၿမိဳ႕တြင္နိုဝင္ ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ၁၄:၀၀ ခ်ိန္က US $ ေဒၚလာေငြစကၠဴ ၅ သန္းကို ထုတ္လုပ္သည့္စက္ ၃ လုံးႏွင့္အတူတရားခံ ၄ ဦးကိုသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕ ၊ ေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၊ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ ဒမ္းလုံး ကစ္တိပရဖတ္ ဦးစီးတဲ့အထူးအဖြဲ႕ကဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့တယ္လို႔ Thairath News သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ ။
Police Cyber Taskforce ဌာနရဲ့ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ Accounts facteing အမည္ျဖင့္ Miss . Jiraphat ဆိုသည္သူ ေဒၚလာေငြစကၠဴမ်ားကို Online မွတဆင့္ေရာင္းခ်ေနသည္ကို သဲလြန္စရရွိရာမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာ ေငြစကၠဴအတုထုတ္လုပ္သည့္စက္ျဖင့္ ေအာ္ဒါလက္ခံေရာင္းခ်သည္ဟုသိရွိရသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေငြစကၠဴဝယ္ယူသူအျဖင့္ အသြင္သ႑န္ယူကာေျခရာခံမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္တရားခံ ၄ ဦးကိုေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။
ဖမ္းဆီးရမိခ်ိန္တြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္လုပ္ၿပီးသားေဒၚလာေငြစကၠဴ ၁၀၀ တန္ အရြက္ေရ ၃၆၀၀၀ တို႔ကိုသိမ္း ဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ေငြစကၠဴ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ( ထိုင္းဘတ္ သန္း ၁၅၀ ႏွင့္ညီမၽွသည္ ) ကိုပုံႏွိပ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ဆက္ လက္၍ ကြင္းဆ က္တရားခံမ်ားအားဆက္လက္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနိုင္ေရးအတြက္ အပူတျပင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔သိရပါသည္ ။
PCT ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဤအမႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔ပတ္ ဝန္းက်င္တြင္ Money Laundering လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆင္စပ္သူမ်ား သံသယရွိသူမ်ား ၊ ေဒၚလာေငြစကၠဴအတုမ်ား လဲလွယ္ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားေတြ႕ရွိပါက PCT ဆိုက္ဘာရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ့ Hotline နံပါတ္ 1599 သို႔ ၂၄ နာရီဆက္သြယ္တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားသည္ဟုသိရွိရသည္ ။
Previous Article ■တောင်းရီးယားတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု ကြုံခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ‘Squid Game’ ရဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သရုပ်ဆောင် Christian Lagahit
Next Article ■အနှိပ်ခန်းသို့ တစ်နှစ်လုံးလုံး တစ်ရက်ကလေးမှမပျက်ပဲ လာရောက်အားပေးသောကြောင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသော အမျိုးသား